Politidirektoratet oo raali galin bixiyay dib u eegisna ku sameyn doona arinta (ukjent) - NorSom News
Politidirektoratet oo raali galin bixiyay dib u eegisna ku sameyn doona arinta (ukjent)
(Foto: Marius Jørgenrud)
Hay-ada maamusha booliska Norwey ee Politidirektoratet oo warsaxaafadeed kusoo daabacay bogooda rasmiga ee internetka ayaa raali galin ka bixiyay dhibta ay keentay arinta (ukjent) loogu qorayo meesha uu qofku ku dhashay, isla markaana sheegay inay dib u eegis ku sameyn doonaan, wadahadalna la yeelan doonaan ururada matalo dadka ay dhibtu soo gaartay ama arintu khusayso.
Sababta ay markii hore arintan usoo rogeen ayay ku micneeyeen in marka ay boolisku passport bixinayaan ay shardi tahay in dhamaan macluumaadka ku qoran passportku ay yihiin kuwa sax ah oo la xaqiijiyay. Sidaas darteedna ay usoo rogeen arintan (ukjent), maadaama dadka ka yimid wadamada qaarkood ay la cadeyn karin meesha ay ku dhasheen.
Waxay kaloo intaas ku dareen in badalka ku yimid passportku uu dhib u keenay dadka qaarkii, sidaas darteedna ay dib uga fiirsan doonaa, isla markaana ay raadin doonaan qaab kale oo lagu xaliyo xaqiijinta meesha uu qofku ku dhashay. Inta laga keenayo xal kalena ay howshu kusii socon doonto sida ay hada tahay. Waxay kaloo sheegeen inay kulan iyo wadahadal ku casuumi doonaan ururada matala dadka ay khusayso si ay ayagana dhankooda uga dhiibtaan fikirkooda ku aadan arintan.
Wadanka uu qofka ku dhashay waa lagu qori doonaa, laakiin magaalada uu ku dhashay ee aan la xaqiijin ayaa lagu qori doonaa (ukjent). Tusaale ahaan, hadaad ku dhalatay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, waxaa laguugu qorayaa : Wadanka uu ku dhashay : Soomaaliya. Meesha uu wadankaas kaga dhashay(ukjent/lama yaqaan).
Hay-ada booliska ayaa u eg mid ugu danbeyn aqbashay cadaadiska kaga imaanayay xaga mediayaha iyo baraha bulshada oo ilaa shalay si xoogan arintan looga hadal hayay. Waxayna arintan sidoo kale saameyn ku yeelan doontaa dad badan uu Norwiiji asal ah balse ku dhashay wadamo kale, sida dadka ay dhaleen safiirada wadamadaas la xusay, ciyaalka ay dhaleen dadka dibada ugu maqnaa wadanka iyo waliba ciyaalka ku dhashay wadamo kale bal ay soo korsadeen qoys norwiiji ah.
Dhanka kale Karin Andersen (SV) oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Norwey ayaa su-aal hordhigtay wasiirka cadaalada Norwey Anders Anundsen, ayada oo waydiinayso sababta arin sidaas u weyn oo saameyn ku yeelanayso dad aad u badan aan marka hore baarlamaanka loo horkeenin, inta aan la dhaqan galin.
Halkan ka akhri war saxaafadeedka Politidirektoratet
Halkana ka akhri su aasha ay xildhibaanadu hor dhigtay Anders Anundsen
Previous articleIn passportka qof wadanka dhalashadiisa haysto lagu qoro (ukjent) waxay noqon kartaa sharci daro
Next articleGabar soomaali ah oo la gudoonsiiyay bilad-sharaf kadib markii ay macalinkeeda ka badbaadisay weerar lagu dili rabay
waxaan soo dhawaynayaa shaqada ad hasya norsowmnwes.com